बधाई ! हेर्नुस यो भिडियो भारतमा नेपालको नाम चिनाउदै आयुष केसी - सुदूर नेपाल
बधाई ! हेर्नुस यो भिडियो भारतमा नेपालको नाम चिनाउदै आयुष केसी
भारतीय चर्चित साना ठुला रियालिटी शों मा नेपालीको सहभागिताहुनु आफैमा गर्व गर्न लायक कुरा हो भने सबै नेपालीको लागि खुसीको कुरा पनि हो । यसरि भारतीय रियालिटी शोमा कुनै नेपाली सहभागी हुँदा देश बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले खुसीको साथमा एकता देखाउने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय भारतीय विभिन्न रियालिटी शोहरुमा नेपालीहरुको बाहुल्यता र पहुँच निकै बढिरहेको छ । हिजो शनिबार प्रसारण भएको कार्यक्रममा इटहरीका प्रितम आचार्यले धमाकेदार प्रस्तुती दिए । उनीसंगै प्रतिष्पर्धा गरिरहेका अर्का नेपाली बालक सिन्धुपाल्चोकका आयुष केसीले पनि हिजो प्रसारण भएको कार्यक्रममा मन छुने प्रस्तुती दिए । उनले ‘दिलवाले दुल्हनिय लेजाएगें’ को चर्चित गीत तुझे देखा तो ये जाना सनम गाएका थिए । गुण गीत गाउदा उनले पनि सबैको मन जित्न अफल भए भने जुरी जज बाट सात प्रतिशत नजिता समेत हासिल गर्न सफल भए ।
एक पछि अर्काे गर्दे नेपाली युवायुवतीहरुले भारतीय रियालिटी शोमा आफनो प्रस्तुती दिँदै नेपाल र नेपालीहरुको नाम उच्च पारेका छन् । यसबीचमा भारतकै चर्चित रियालिटी शो सारेगमप लिटिल च्याम्समा नेपालका दुई बालकहरुले गजब्बको प्रस्तुती दिईरहेका छन् । भारतका डान्स र गायन रियालिटी शोमा प्राय नेपालीको सहभागिता हुने गरेको छ । कुमार सानु र लता मंगेशकरको आवाजमा रहेको उक्त गीत आयुषमले निकै कर्णप्रिय तरिकाले गाए । रोमाण्टिक र मेलोडी गीत गाउन माहिर आयुषले गाएको गीत सिधै मनमा बस्ने किसिमको थियो । उनको प्रस्तुती पनि गर्व गर्न लायक थियो । आयुषको प्रस्तुतीपछि उनको प्रशंसा जज , जुरी मेम्बर र अतिथी जज जस्विन्दर निरुलाले पनि प्रशंसा नगरी बस्न सकिनन् । जजहरु सान , ऋचा शर्मा र अमाल मलिक आयुषको प्रस्तुतीबाट मन्त्रमुग्ध भए भने जुरी लगायतका टिमबाट उनले स्ट्याण्डिङ ओभिएसन नै पाए । त्यतीमात्र होईन उनले जुरीबाट सय मा सय प्रतिशत नै ल्याई चार्टबस्टर पफर्मेन्स दिए । लाखौ प्रतिस्पर्धीमाझ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउदै प्रितम धमाका मच्चाइरहेका छन् । अडिसनबाटै आफुलाई अब्बल साबित गरिसकेका प्रितम जज, जुरी जज, तथा अतिथि जजका निकै प्रिय बनिसकेका छन् ।
उनले यसरी नै चार्टबस्टर पफर्मेन्स दिईरहे फाईनलसम्मको यात्रा सहजरुपले तय गर्न सक्छन् ।उनले यसरी नै चार्टबस्टर पफर्मेन्स दिईरहेको खण्डमा आयुषले पनि सोको फाईनलसम्मको यात्रा सहजरुपले तय गर्न सक्छन् । सुरशाला आइडलका बिजेता समेत रहेका आयुषले पनि आफनो प्रस्तुतीबाट जज तथा जुरीहरुको मन जितेका छन् । भक्तपुरको मोर्डन स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका उनी संगित भनेपछि सानैबाट भुतुक्क हुने गर्थे । केही गीतसमेत रेकर्ड गरिसकेका आयुष चर्चित गायक अमृत क्षेत्रीका संगितका शिष्य समेत हुन् । यति सानो उमेरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दे बिदेशी च्यानलमा नेपाल र नेपालीहरुको नाम राखिराख्दा सबै नेपालीहरुले प्रितमप्रति गर्व महसुस गरिरहेका छन् ।
Previous Post: फेरि खस्यो हेलिकप्टर:पाँचको निधन
Next Post: नेपालका प्रितमले फेरि भारतमा तहल्का मच्चाए – भिडियो